जापानमा Best उत्तम किनमेल स्थानहरू र Recommend सिफारिश गरिएका ब्रान्डहरू - Best of Japan
GOTEMBA प्रीमियम आउटलेट्स, Shizuoka, जापान = शटरस्टक
यदि तपाईं जापानमा किनमेल गर्नुहुन्छ, तपाईं निश्चित रूपमा उत्तम शपिंग स्थानहरूमा सकेसम्म धेरै रमाउन चाहनुहुन्छ। तपाईं सायद आफ्नो समय शपिंग स्थानहरूमा बर्बाद गर्न चाहनुहुन्न जुन त्यति राम्रो छैन। त्यसैले यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जापानमा सब भन्दा राम्रो किनमेल ठाउँहरू परिचय दिनेछु। कृपया प्रत्येक श्रेणीको लागि सबै भन्दा राम्रो किनमेल ठाउँहरू थाहा पाउनुहोस् जस्तै डिपार्टमेन्ट स्टोर, एक्स्क्लुभ शपिंग डिस्ट्रिक्ट, आउटलेट मल, अकिहाबारा इलेक्ट्रिक स्ट्रिट आदि। त्यसो भए, यदि तपाईं जापानमा लगाउने लुगाहरू किन्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं उचित र उत्तममा राम्रोसँग किनमेल गर्न चाहानुहुन्छ। ब्रान्ड स्टोर त्यसैले म तपाईंलाई सिफारिस गरिएको ब्राण्ड प्रस्तुत गर्नेछु। थपको रूपमा, म यस क्षेत्रको रमाईलो किनमेल क्षेत्रहरू पनि गणना गर्दछु, त्यसैले कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्।
जापानमा Best सर्वश्रेष्ठ किनमेल ठाउँहरू
Japan जापानमा सिफारिश गरिएका ब्रान्डहरू
जापानको क्षेत्रमा सर्वश्रेष्ठ उत्पादनहरू
Isetan: जापान मा सबै भन्दा लोकप्रिय डिपार्टमेन्ट स्टोर
लामो स्थापना विभागको स्टोर "Isetan" को भवन शहर = शटरस्टकको प्रतीक हो
यदि तपाईं टोकियोमा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा किनमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिन्जुुकुको इसेटानमा जान सिफारिस गर्दछु। Shinjuku मा Isetan एक दुकान को रूप मा परिचित छ जहाँ तपाईं जापान मा डिपार्टमेन्ट स्टोर बीच सबै भन्दा परिष्कृत उत्पादनहरु किन्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ Nihonbashi मा Mitsukoshi र Ginza मा Mitsukoshi Ginza स्टोर लक्जरी सामान संग डिपार्टमेन्ट स्टोर को रूप मा छन्। जे होस्, यदि तपाईं अपस्केल र फेशनेबल आईटमहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने, यो सबैभन्दा कुशल Isetan Shinjuku स्टोर जान।
Isetan Shinjuku स्टोर मा, तपाईं Isetan को मुख्य भवनमा महिलाको कपडा र महिलाको सामान खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। मुख्यको तहखानेमा भवन, राम्रो बिक्री मिठो र रक्सीको रूपमा एक बिक्री फ्लोर छ। मुख्य भवन बाहेक, त्यहाँ "पुरूष भवन" छ जहाँ तपाईं पुरुषको कपडा र पुरुषहरूको आपूर्ति किन्न सक्नुहुन्छ। यो पुरुषको भवन धेरै लोकप्रिय छ। पुरुषको कपडा विभागमा यस पुरुष भवनको बिक्री टोकियोमा डिपार्टमेन्ट स्टोरको कुल बिक्रीको %०% पुग्छ। यस बाहेक, त्यहाँ धेरै एनेक्सहरू छन् जहाँ तपाईं आन्तरिक सामानहरू किन्न सक्नुहुन्छ।
Isetan को आधिकारिक साइट हो यहाँ.
जिन्जा: टोकियोको सब भन्दा अनन्य किनमेल जिल्ला
यदि तपाईं सपि district्ग जिल्लामा पैदल यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने, म Ginza सिफारिश गर्दछु। टोकियोमा तीन प्रमुख किनमेल जिल्लाहरू छन्। ती मध्ये गिन्जा सबैभन्दा फैशनेबल जिल्ला हो। यो विदेशी पर्यटकहरूको लागि पनि लोकप्रिय छ।
सबै भन्दा पहिले, म टोकियो मा तीन प्रतिनिधि किनमेल जिल्लाहरु को बारे मा वर्णन गर्छु।
टोकियो जिन्जा चुओ, साँझमा गिन्जा सबवे स्टेशनको प्रवेशद्वार र गिन्जामा प्रतीकात्मक भवन "वाको" को दृश्य = शटरस्टक
टोक्योमा recommended सिफारिश गरिएको किनमेल जिल्लाहरू: शिन्जुकु, शिबुया, गिन्जा
टोकियो मा धेरै किनमेल जिल्लाहरु छन्। ती मध्येका, क्षेत्रहरू म सिफारिश गर्न चाहन्छु निम्न तीन हुन्।
यो शहर टोकियोको सबैभन्दा लोकप्रिय किनमेल सडक हो। माथिको Isetan Shinjuku मा पनि छ। त्यहाँ डिपार्टमेन्ट स्टोर देखि इलेक्ट्रिक शप को लागी धेरै पसलहरु छन्, ताकि जो कोही पनि शपिंग को मजा लिन सक्छन्। त्यहाँ एक मनोरञ्जन र रातो बत्ती जिल्ला पनि छ जसलाई "काबुकिचो" भनिन्छ minutes मिनेट पैदल।
यस शहरमा धेरै पसलहरू छन्, मुख्यतया युवाहरूका लागि, सिन्जुकूको तुलनामा। महामारीप्रति संवेदनशील युवाहरू यस शहरमा भेला हुन्छन्। अवश्य पनि, त्यहाँ ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू जस्तै टोकियु डिपार्टमेन्ट स्टोर र Seibu डिपार्टमेन्ट स्टोर छन्, त्यसैले कोही पनि शपिंगको आनन्द लिन सक्दछ।
शिन्जुकु र शिबुयाको तुलनामा यस शहरमा वयस्कहरूको लागि धेरै उच्च-अन्तको ब्रान्ड पसलहरू छन्। यदि तपाईं टोकियोको उच्च-किनमेल किनमेल जिल्लामा जान चाहानुहुन्छ भने, म यो शहर सिफारिस गर्दछु। अर्कोतर्फ, हालसालै, UNIQLO र GU जस्ता व्यावहारिक कपडा ब्रान्डहरूको विशाल स्टोरहरूको संख्या बढ्दो छ, त्यसैले जब तपाईं जापानमा उचित मूल्यमा लुगा लगाउने खरीद गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं गिन्जा जान सक्नुहुन्छ।
Ginza मा सिफारिश गरीन्छ स्थानहरु
Ginza को नक्शा, टोक्यो
म तल गिन्जामा सिफारिश गरिएको किनमेल स्थानहरू परिचय गर्दछु। जब तपाईं हेडलाईन क्लिक गर्नुहुन्छ, प्रत्येक पसलको आधिकारिक साइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुन्छ।
Ginza मा तीन विभाग स्टोर छन्। Ginza Mitsukoshi ती मध्ये एक हो। यो Ginza 4-chome को छेउमा अवस्थित छ जुन Ginza को केन्द्र हो।
मित्सुकोशी जापानको अग्रणी लक्जरी डिपार्टमेन्ट स्टोर हो, फ्ल्यागशिप स्टोर निहोनबाशी, टोकियोमा अवस्थित छ। Ginza Mitsukoshi फ्लगशिप स्टोर भन्दा सानो छ, तर पसल भित्र पर्याप्त प्रमुख लक्जरी ब्रांडहरू छन्। पहिलो तलामा सौन्दर्य प्रसाधन कुना गिन्जामा सबैभन्दा ठूलो छ। बेसमेन्टमा धेरै महँगो मिठाईहरू बेचिन्छ।
Ginza Mitsukoshi जस्तै, Wako Ginza 4-chome चौराहेमा अवस्थित छ। क्लक टावरको सुन्दर भवन जिन्जाको प्रतीक हो।
वाकोमा, प्रिमियम वाच र गहनाहरू आदि बिक्रीमा छन्। चौराहेको अनुहार शो विन्डो धेरै सुन्दर छ र त्यहाँ धेरै पर्यटकहरूले चित्र लिइरहेका छन्।
मत्सुया एक डिपार्टमेन्ट स्टोर हो जुन Ginza Mitsukoshi सँगसँगै लामो समयसम्म रहन्छ। यस स्टोरमा, तिनीहरू महिलाको लुगा र सामानहरूमा ध्यान दिन्छन्। Ginza Mitsukoshi को तुलनामा, जवान महिला ग्राहकहरु को लागी धेरै फेसनल वस्तुहरु छन्। Ginza Mitsukoshi साथ साथै मुख्य लक्जरी ब्रान्डको बिक्री फ्लोर पर्याप्त छ।
Ginza 4-chome को चौराहेबाट, "Chuo-dori" सडकमा थोरै उत्तरमा हिड्नुहोस्, तपाईं मत्सुया आउनुहुनेछ। सडक पारको विपरित पक्षमा, च्यानल जस्तै लक्जरी ब्रांडहरू लाइनमा लामा छन्।
Hankyu पुरुषहरूको टोकियो
हन्कियु मेन्स टोकियो एक डिपार्टमेन्ट स्टोर हो जुन पुरुषको कपडा र पुरुषहरूको आपूर्तिमा विशेषज्ञ छ। ओसाका हान्कियु एक लक्जरी डिपार्टमेन्ट स्टोर हो। यस गिन्जा पसलमा पनि उनीहरूसँग धेरै राम्रा ब्रान्ड नामका कपडा छन्। पुरुषको लागि डिपार्टमेन्ट स्टोरको रूपमा शिन्जुकुमा इसेटान टोकियोमा लोकप्रिय हुँदैछ। यद्यपि यो Hankyu पुरुषहरूको टोकियो अझ राम्रो र राम्रो हुँदै गइरहेको छ।
गिन्जा सिक्स टोक्योको गिन्जा क्षेत्रमा अवस्थित लक्जरी शपिंग कम्प्लेक्स हो, मोरी बिल्डिंग कम्पनी, सुमिटोमो कर्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूपमा विकसित गरिएको = शटरस्टक
जिन्जा सिक्स अप्रिल २०१ 2017 मा खोलिएको विशाल लक्जरी शपिंग कम्प्लेक्स हो र धेरै व्यक्तिको भीडले भरिन्छ। यो सुविधा "Chuo-dori" सडकको सामना गर्दछ। जमिन (meters 13 मिटर अग्लो) माथिको १ stories कथाहरू मध्ये, तहखाने २ देखि flo फ्लोर किनमेल जटिल हुन्। यहाँ लगभग २56० ब्रान्ड पसलहरू छन्। त्यहाँ १-औं फ्लोरमा उच्च श्रेणीका रेष्टुरेन्टहरू छन्।
Itoya स्टेशनरी को एक विशेष स्टोर हो। फ्ल्यागशिप स्टोर १२ स्टोरीहरू उच्च छ, निकटको छेउछाउको एनेक्स 12 कथाहरू अग्लो छ। धेरै जसो फ्लोर स्टेशनरी विभाग हो। उनीहरूसँग फ्यान्सी फाउन्टेन पेन, बलपोइन्ट पेन, पेन्सिल, जापानी कागज, नोटबुक, ग्रीटिंग कार्ड, पेन्टहरू लगायतका बिभिन्न किसिमका उत्पादहरू छन्। धेरै शान्त वस्तुहरू विदेशी पर्यटकहरू बीच लोकप्रिय हुँदैछन्।
UNIQLO जापानको अग्रणी परिधान ब्रांड हो। UNIQLO स्टोरहरूमा, लामो समयसम्म लगाउन सकिने लुगाहरू कम मूल्यमा बेचिन्छ। पनी उही वस्तुको बिभिन्न रंगहरू छन्। "हीट टेक" भनिने उच्च-टेक पोशाक UNIQLO को लोकप्रिय उत्पादनहरू मध्ये एक हो। यो एक व्यक्ति को पसीनाले गर्मी उत्पन्न गर्दछ। जब तपाईं हीट टेक अंडरवियर लगाउँनुहुन्छ, यो जाडोमा पनि तुलनात्मक रूपमा तातो हुन्छ।
UNIQLO Ginza यस पोशाक ब्रान्डको फ्ल्यागशिप स्टोर हो र यो "चुओ-डोरी" सडकमा छ। १२ कहानी भवनका सबै फ्लोरहरू UNIQLO को बिक्री फ्लोर हुन्। मलाई लाग्छ कि तपाईं यस कोषमा जानुहुन्छ भने उचित कोटहरू, जम्परहरू, स्वेटरहरू, शर्टहरू, अंडरवियर, आदि पाउन सक्नुहुन्छ।
GU UNIQLO को बहिनी ब्रान्ड हो। UNIQLO लुगा पर्याप्त सस्तो छ, तर GU सस्तो पनि छ। UNIQLO को लुगाहरु सबै उमेर लाई कवर गर्दछ, तर GU को कपडा युवाहरुलाई लक्षित गरीन्छ। विशेष गरी महिलालाई लक्षित गर्नु एक ठूलो सुविधा हो। UNIQLO को कपडा लामो समयको लागि लगाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो, तर GU को कपडाले यस प्रवृत्तिलाई दर्शाउँछ। यदि युवतीहरू फेशनेबल कपडा सस्तोमा किन्न चाहन्छन र एकपछि अर्को नयाँ अग्रणी लुगा किन्न चाहन्छन् भने म GU लाई सिफारिश गर्दछु।
GU Ginza उही "Chuo-dori" सडकमा माथि उल्लिखित UNIQLO Ginza जस्तै छ। यो पसल पनि धेरै ठुलो छ। तपाईंको आवश्यकता अनुसार यी दुई स्टोरहरूको शोषण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यी पसलहरु बाहेक गिन्जामा अनगिन्ती पसलहरु छन्। म फेरि ती पसलहरूलाई छुट्टै पृष्ठमा परिचय दिनेछु।
UNIQLO र GU का लागि, म यो पृष्ठको दोस्रो भागमा प्रस्तुत गर्दैछु। मलाई चलचित्रको बारेमा जानकारी गराइएको छ, त्यसैले यदि तपाईंलाई आपत्ति पर्दैन भने कृपया त्यसलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
Ginza मा लक्जरी ब्रान्ड स्टोरहरू हेरौं!
गिन्जामा Bvlgari स्टोर, विश्वको सबैभन्दा विलासी किनमेल जिल्लाहरु मध्ये एक हो। गिन्जामा धेरै लक्जरी ब्रान्ड पसलहरू छन्। = शटरस्टक
Ginza मा लक्जरी ब्रान्ड शप को नक्शा
गिन्जामा डिपार्टमेन्ट स्टोर र शपिंग मल्ल बाहेक धेरै विलासी ब्रान्ड पसलहरू छन् जुन माथि उल्लेख गरिएको छ। वास्तवमा, गिन्जामा किनमेल गर्दा, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू भन्दा यी ब्रान्ड शपहरू हेर्न सबैभन्दा रमाईलो हुन्छन्। अधिकांश विश्व प्रसिद्ध लक्जरी ब्रांडहरू गिन्जामा छन्। माथिको नक्शामा क्लिक गर्नुहोस् छुट्टै पृष्ठमा ठूलो नक्सा हेर्नका लागि। ब्रान्ड शपहरू प्रदर्शन गरिएको हुनाले, कृपया गिन्जामा स्थिति जाँच गर्नुहोस्।
जब तपाईं गिन्जा जानुहुन्छ, म केवल एउटा भवनमा किनमेल नगर्ने सिफारिस गर्दछु, तर जिल्लामा घुम्न र विभिन्न पसलहरूमा जान्छु।
गिन्जामा, सबै भवनहरूको उचाइ meters 56 मीटर वा कममा सीमित छ। त्यसकारण, गिन्जा जिल्लामा पैदल यात्रा गर्ने पदयात्रीहरूले माथिल्लो तल्कामा सडकमा हिंड्दा दबाबको भावना महसुस गर्दैनन्। पैदलयात्रीहरूले आसमान नजिकै महसुस गर्छन्।
सम्पूर्ण शहर डिजाइन गरिएको छ कि चारैतिर हिड्न रमाईलो छ। सबै Ginza सडकहरू अद्वितीय छन्, त्यसैले वरिपरि हिंड्नुहोस् र आफ्नो मनपर्ने पसलहरू फेला पार्नुहोस्।
>> Ginza जिल्ला को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेटहरू: जापानको सबैभन्दा लोकप्रिय आउटलेट मल
जापानको शिटुओका गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेटमा माउन्टेन फुजी दृश्य पोइन्टको सूर्यास्त समयमा सुन्दर दृश्यहरू = शटरस्टक
जापान मा धेरै दुकानहरु को पसलहरु छन्।
आउटलेट उत्पादनहरू आईटमहरू हुन् जुन ब्रान्ड शपले साधारण पसलहरूमा बिक्री गर्न सक्षम छैनन् केही कारणका लागि खरोंचहरू। यो नियमित आईटमहरू भन्दा धेरै सस्तो हो। धेरै जसो आउटलेट उत्पादनहरू कुनै समस्या बिना लगाउन सकिन्छ, यो जापानमा धेरै लोकप्रिय भइरहेको छ।
आउटलेट मलहरूका बारे राष्ट्रव्यापी, म उनीहरूलाई अर्को लेखमा विस्तृत रूपमा परिचय गर्नेछु। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई संक्षिप्त रूपमा सिफारिश गरेको मललाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
त्यो माथिको चित्रमा "गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेटहरू" हो। गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेट जापानको सबैभन्दा ठूलो आउटलेट मल्ल हो र करीव २१० ब्रान्ड्ड पसलहरू छन्। कुल बिक्री क्षेत्र लगभग 210 45000००० वर्ग मीटर छ। यसबाहेक, २०२० को वसन्तमा तिनीहरू करिब १०० स्टोरहरू बढाउने योजनामा ​​छन्।
यदि तपाईं यो आउटलेट मल्लमा जानुहुन्छ भने तपाईं सस्तोमा धेरै ब्रान्डको सामान किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं बिक्री अवधि को लागी जानुहुन्छ भने, तपाईं सामान्य भन्दा -०-50% सस्तो किन्न सक्नुहुन्छ।
थप रूपमा, गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेटहरू माउन्टको निकट वरपर अवस्थित छ। फुजी तपाईं राजसी माउंट हेर्न सक्नुहुन्छ। Fuji किनमेल गर्दा।
टोकियोबाट गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेटहरू, दैनिक बसहरू संचालित हुन्छन्। यदि तपाईं ओडक्यू इलेक्ट्रिक रेलवे एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा गोटेम्बा स्टेशन जानुभयो भने, तपाईं स्टेशनबाट गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेटहरूमा निःशुल्क शटल बस प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
निम्न भिडियोले गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेटहरू राम्रोसँग परिचय गर्दछ।
>> गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेटहरूको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
DAISO Kinshicho Store: जापानको सब भन्दा ठूलो १०० येन पसल
के तपाईंलाई जापानको "१०० येन शप" को बारे थाहा छ?
"१०० येन शप", यसको नामले संकेत गरे जस्तै पसल हो जहाँ १०० येन वस्तुहरू लाइनमा राखिन्छन्। यस प्रकारका पसलहरू हालसालै विदेशबाट आएका पर्यटकहरू बीच धेरै लोकप्रिय छन्।
लोकप्रियताको दुई कारणहरू छन्। पहिलो, सामानहरू धेरै अद्वितीय र सुन्दर छन्। त्यहाँ जापानी परम्परागत शिल्प आइटमहरू जस्तै फोल्ड फ्यान र सिरामिकहरू छन्। प्यारा स्टेशनरी र स्वादिष्ट मिठाईहरू पनि लोकप्रिय छन्।
दोस्रो, तपाई यी सबै चीजहरू १०० येनका लागि किन्न सक्नुहुनेछ (यद्यपि उपभोग कर थपिने छ)। किनकि सामानहरू यति सस्तो छन्, तपाईं धेरै प्रकारका सामानहरू किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग एक धेरै रमाइलो शपिंग समय हुन सक्छ।
१०० येन पसलहरू जापानको चारैतिर अवस्थित छन्। ती मध्ये, म सिफारिश गर्दछ DAISO किन्सिचो स्टोर विशेष गरी टोकिओको किन्सिचो स्टेशनको अगाडि। यो पसल जापानको सब भन्दा ठूलो १०० येन पसल हो। बिक्री फ्लोर क्षेत्र 100००० वर्ग मीटर भन्दा बढि छ। यो पसलमा सबै प्रकारका उपभोक्ता वस्तुहरू छन्। थप रूपमा, विदेशी पर्यटकहरूका लागि, त्यहाँ धेरै जापानी पारम्परिक शिल्पहरू छन् जो स्मृति चिन्हका लागि उपयुक्त छन्। मलाई लाग्छ यो रमाईलो हुनेछ यदि तपाईं तिनीहरूलाई हेर्नुभयो भने पनि। माथिको भिडियो DAISO Kinshicho Store को बारे मा सारांश छ, यदि कृपया आपत्ति छैन भने कृपया यसलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
मलाई १०० येनको पसल मन पर्छ, र मैले १०० येन पसलहरूमा विशेष लेख लेखेको छु। म फेरि यस साइटमा १०० येन शपको सुविधा लेख सम्पादन गर्दछु।
दुर्भाग्यवस, जहाँसम्म मलाई थाहा छ, डेसो किन्सिचो स्टोरको बारेमा अंग्रेजीमा परिचय गर्न कुनै आधिकारिक वेबसाइट छैन। तलको साइट (पीडीएफ) मा, डेसो किन्सिचो स्टोर र अन्य प्रमुख १०० येन पसलहरू सूचीबद्ध र परिचय गराइएका छन्, त्यसैले कृपया यसलाई सन्दर्भित गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई आपत्ति छैन भने। डेसो किन्सिचो स्टोरको नक्शा हो यहाँ.
>> कृपया डेसो आदिको बारेमा यस साइट (PDF) हेर्नुहोस्
कप्पाबाशी: जापानको सब भन्दा ठूलो किचनवेयर शहर
यदि तपाईं टोकियोमा Asakusa हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई एक अनौंठो शपिंग सडकमा जान सिफारिस गर्दछु जहाँ तपाईं Asakusa बाट हिंड्न सक्नुहुन्छ। किनमेल सडकको नाम "काप्पबाशी" हो। जापानी भाँडा, चाकू, भाँडाकुँडाहरू, पकाउने भाँतिहरू इत्यादि बेच्न करीव करीव १ special० वटा विशेष पसलहरू यस सडकमा लाइनमा छन्।
यस सडकमा, जापानमा व्यावसायिक खाना पकाउन आउँदछन्। त्यसो भए, पसलहरूमा भान्साकोठाको चाकू र भाँडा ठूलो ਪੱਧਰका हुन्छन्। यसबाहेक, रेस्टुरेन्टको प्रवेश द्वारमा राख्नका लागि भाँडाका नमूनाहरू धेरै विस्तृत हुन्छन्, मेरो लागी तपाईं यो देख्दा थकित हुनुहुन्न।
हालसालै, धेरै विदेशी पर्यटकहरू कप्पबाशीमा आउँदछन्।
>> कप्पाबाशीको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
योडोबाशी-अकिबा: अकिहाबराको सब भन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स स्टोर
योडोबाशी- AKIBA अकीहाबारा स्टेशनको अगाडि। Yodobashi क्यामेरा जापान मा प्रसिद्ध छ। यो चेन स्टोर हो जुन मुख्यतया इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू बेच्दछ। जापान मा २१ शटारस्टक छन्
Yodobashi-AKIBA, अकिहाबरा, टोक्यो = शटरस्टकको पहिलो तल्ला
अकिहाबारा, टोकियोमा त्यहाँ धेरै ठूला उपकरणहरूका विशेष पसलहरू छन्। Yodobashi - AKIBA तिनीहरूका बीचमा सबै भन्दा ठूलो स्टोर हो। यस स्टोरमा क्लर्कले अंग्रेजी र चिनियाँ भाषामा विदेशबाट आएका पर्यटकहरूलाई जवाफ दिनेछन्। यदि तपाईं यस स्टोरमा जानुहुन्छ भने, तपाईंसँग प्रायः घरेलु उपकरणहरू हुन सक्दछन्।
आधिकारिक स्टोरको नाम "Yodobashi क्यामेरा मल्टिमेडिया AKIBA" हो। नौ तला माथि जमिन र बेसमेन्टमा छैठौं फ्लोरसम्म विशाल भवन (स्टोर क्षेत्र लगभग, 63,558 वर्ग मिटर)।
घर इलेक्ट्रोनिक्स विभागका साथै यस भवनमा ट्राभल सामान स्टोरहरू, पुस्तक पसलहरू, स्टेशनरी पसलहरू, रेकर्ड पसलहरू, ब्याटि centers सेन्टरहरू आदि पनि छन्। त्यहाँ धेरै रेस्टुरेन्टहरू पनि छन्। त्यहाँ स्वादिष्ट कन्वेयर बेल्ट सुशी पसल र रामेन शप छ। मलाई यहाँ रामेन पसल मन पर्छ।
यदि तपाईं अकिहाबारा र इलेक्ट्रिक शहरको चारै तिर घुम्दै हुनुहुन्छ भने, निम्न नक्सालाई सन्दर्भित गर्न सजिलो छ। यदि तपाईं नक्शा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईं एक अलग पृष्ठ मा एक ठूलो नक्शा देख्नुहुनेछ।
अकिहाबारा, टोकियो को नक्शा
यहाँबाट, म जापानी पोशाक ब्रांडहरू शुरू गर्न चाहान्छु। के म परिचय दिन चाहन्छु लक्जरी ब्रांड होइन तर क्याजुअल ब्रान्ड ब्रान्ड हो। यदि तपाईं जाडो, वसन्त, गर्मी, जापानमा शरद clothesतुमा लुगाहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि तपाईं निम्न ब्रान्डको पसलहरूमा जान सक्नुहुन्छ। किनभने निम्न ब्रान्डको कपडा एकदम सस्तो छ। मलाई लाग्छ कि तपाईं यी ब्रान्डको कपडा सहजतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यी ब्रान्डका धेरै स्टोरहरू छन्। सबै तरिकाले, कृपया यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्।
UNIQLO स्टोर भित्री दृश्य। Uniqlo कं, लिमिटेड एक जापानी आकस्मिक पहिरन डिजाइनर, निर्माता र रिटेलर = शटरस्टक हो
सबैभन्दा पहिले, कपडाको ब्राण्ड म तपाईंलाई सिफारिस गर्न चाहन्छु UNIQLO हो। त्यहाँ तीन कारणहरू छन् किन म यो ब्रान्ड सिफारिश गर्दछु।
सर्वप्रथम, UNIQLO का लुगा जुनसुकै उमेर वा सेक्सको भए पनि लगाउन सकिन्छ। उही कपडाको साथ पनि, ग्राहकहरू विभिन्न र colors्गबाट ​​छनौट गर्न सक्दछन्, त्यसैले सबैलाई उच्च सन्तुष्टि हुन्छ। यी कपडाहरू राम्रोसँग मिलाइएको छन्। त्यहाँ धेरै कपडा पनि छन् जुन "हीट टेक" भनिने उच्च प्रदर्शन फेब्रिक प्रयोग गर्थे। यी कपडाहरु पसिना को कारण गर्मी उत्पन्न भएकोले, जाडो मा जब तपाईं यी लुगा लगाउनु पर्छ तपाई न्यानो महसुस गर्नु पर्छ।
दोस्रो, UNIQLO को कपडा एकदम सस्तो छ। UNIQLO स्टोरहरूमा तिनीहरू प्राय: छुट बिक्री गर्छन्। यदि तपाईं सफलतापूर्वक तिनीहरूलाई बिक्री अवधि को लागी खरीद, तपाईं सस्तोमा राम्रो लुगा पाउनुहुनेछ।
तेस्रो, UNIQLO स्टोरहरू जापान भर मा अवस्थित छन्। तपाई सजिलै UNIQLO स्टोर तपाईको यात्रा को लागी पाउन सक्नुहुन्छ। माथि सिफारिस गरिएको स्टोर गिन्जामा प्रमुख स्टोर हो जुन म सिफारिस गर्न चाहन्छु। यदि तपाईं व्यस्त हुनुहुन्छ भने, तपाईं एयरपोर्टमा UNIQLO स्टोरमा ड्रप गर्न सक्नुहुनेछ।
UNIQLO को आधिकारिक वेबसाइट तल छ। दुर्भाग्यवस त्यहाँ कुनै अंग्रेजी पृष्ठ छैन। पृष्ठको तल, तपाइँ तपाइँको घर देश छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाइँ सिंगापुर छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ सिंगापुरमा UNIQLO स्टोरहरूको बारेमा पृष्ठ देख्नुहुनेछ। यदि तपाईं यसलाई देख्नुहुन्छ भने, तपाईं केही हदसम्म उत्पादनहरूको विशेषताहरू जान्नुहुन्छ।
>> UNIQLO को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
मध्य टोकियोको गिन्जामा ठूलो जीयू कपडा स्टोरको फ्रुटको दृश्य। जीयू फास्ट रिटेलिंगको स्वामित्वमा छ जसले यूनिक्लो = शटरस्टकको स्वामित्व पनि राख्छ
GU UNIQLO को बहिनी ब्रान्ड हो। यो UNIQLO कपडा भन्दा सस्तो पनि छ। यद्यपि जीयूको कपडा मूल रूपमा उनीहरूको १० से to० को दशकका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दछ। महिलाको लागि लुगाहरू पूरा भइरहेका छन्, तर त्यहाँ पुरुषहरूका लागि केहि प्रकारका कपडाहरू छन्। यदि तपाईं आफ्नो s० देखि s० को दशकमा हुनुहुन्छ, र यदि तपाईं एक महिला हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई GU स्टोरहरू रोक्न प्रोत्साहित गर्दछु। आधिकारिक साइट तल छ। दुर्भाग्यवस, त्यहाँ कुनै अंग्रेजी पृष्ठ छैन। तपाईं पृष्ठको तल आफ्नो घर देश छनौट गर्न सक्नुहुने भएकोले, कृपया तपाईंको घर देश छनौट गर्नुहोस्।
>> GU को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
MUJI स्टोर, टोक्यो = शटरस्टकको दृश्य
UNIQLO जस्तै, MUJI एक परिधान ब्रान्ड हो जसले सस्तो र राम्रो कपडा प्रदान गर्दछ। MUJI मा, हामी फर्नीचर र स्टेशनरी बिक्री गर्दछौं।
UNIQLO कपडाको लागि, समान प्रकारको कपडा, धेरै र colorsहरू उपलब्ध छन्। त्यो UNIQLO को विशेषता हो। अर्को तर्फ, MUJI मा, यति धेरै रंगहरू तैयार छैनन्। यसको सट्टामा, MUJI को कपडाको सरल सुन्दरता छ। भनिन्छ कि जेनको चिन्तन यसको सरलताको पृष्ठभूमिमा छ। मलाई MUJI को प्राकृतिक कपडा पनि मन पर्छ।
>> MUJI को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
दुर्भाग्यवस, त्यहाँ कुनै आधिकारिक अंग्रेजी साइट छैन। तलको नक्शामा क्लिक गर्नुहोस् Google नक्सामा WORKMAN स्टोरहरू देखाउँदै।
>> WORKMAN को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
WORKMAN पसलहरूको नक्शा
निलो जीन्स: कोजिमा (कुराशीकी, ओकायामा प्रान्त)
Kosshiki, JAPAN = शटरस्टकमा कोजीमा जीन्स सडकमा कोजीमा स्टेशन
यदि तपाईंलाई जीन्स मनपर्दछ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि "कोजिमा जीन्स स्ट्रिट" द्वारा कुराशिकी, पश्चिमी जापानको बाहिरी भागमा।
कुराशीकी शहरको कोजिमा क्षेत्रमा अत्यधिक उच्च गुणस्तरको जीन्स उत्पादन भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा धेरै उत्कृष्ट कारीगरहरू छन्। ती जीन्सको खोजीमा, संसारभरिका जीन्स प्रेमीहरू भेला हुन्छन्। त्यहाँ बढि जीन्स पसलहरू छन् ताकि तिनीहरू यस क्षेत्रमा जीन्स किन्न सक्छन्। कोजिमा जीन्स सडक हो जहाँ धेरै स्टोरहरू भेला भएका छन्।
कोजिमामा बनाइएको जीन्स सामान्यतया महँगो हुन्छ, तर कोजिमा जीन्स सडकमा, तपाईं यसलाई सस्तोमा किन्न सक्नुहुनेछ। कोजिमामा, धेरै निलो प्रकारका साथै ट्याक्सीदेखि भेन्डि machines मेशिनहरूमा जीन्स छन्, पक्कै पनि तपाईंले हिंड्न रमाइलो गर्नुपर्दछ।
>> कोजिमा जीन्स सडकको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
पर्ल: टोबा (माई प्रिफेक्चर)
टोबा किन्तेत्सु एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा नागोया स्टेशनबाट करीव minutes ० मिनेट दक्षिणमा छ। तपाईं सुन्दर समुद्र र त्यहाँका टापुहरूको प्रशंसा गर्नुहुनेछ। यस ठाउँमा मोतीहरू १०० बर्ष भन्दा धेरै पहिले नै संस्कृत भएका छन्।
वर्तमान मिकिमोटो कर्पोरेशनका संस्थापक कोकिचि मकिमोटोले यस क्षेत्रमा मोती खेती गर्न शुरू गर्यो। त्यसबेलादेखि, तोबा मोतीको खेतीका लागि विश्व केन्द्र हो। यदि तपाईं टोबा जानुभयो भने, तपाईं धेरै सुन्दर मोतीहरू देख्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि तपाईं किन्न सक्नुहुन्छ। मोतीहरू यस्तो सुन्दर प्राकृतिक वातावरणमा हुर्काइएको छ भन्ने जानेर, तपाईं रोचक यात्रा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
>> Mikimoto को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ